/ Products / Fat Kurasikirwa poda / L-carnitine upfu
Rating: SKU: 541-15-1. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukuraira kweL-carnitine powder (541-15-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw L-carnitine powder Basic Characters
Molecular Kurema: 161.2
Raw L-carnitine powder kushandiswa
Raw L-carnitine powder Mazita
Muenzaniso weL-carnitine ndiwo 500-2,000 mg pazuva.
Kunyange zvazvo muyero uchinyanya kubva pakudzidza kuti udzidze, heino mhedziso yekushandiswa uye dose yega fomu imwe neimwe:
(1) Acetyl-L-Carnitine: Iyi fomu yakanakira hutano hwehuropi uye mashandiro. Maitiro anosiyana kubva pa600-2,500 mg pazuva.
(2) L-Carnitine L-Tartrate: Fomu iri rinonyanya kushanda pakuita kwekuita. Maitiro anosiyana kubva ku1,000-4,000 mg pazuva.
(3) Propionyl-L-Carnitine: Iyi fomu yakanakira kusimudzira kuyerera kweropa kune avo vane yakakwira BP kana mamiriro ane hukama. Maitiro anosiyana kubva ku400-1,000 mg pazuva.
Kubva pakuongorora kwekutsvakurudza, kusvika ku 2,000 mg (2 gramu) pazuva rinoratidzika rakachengeteka kushandiswa kwenguva refu uye nhengo inobatsira yemhando dzakawanda dzeL-carnitine.
Warning on Raw L-carnitine powder
Mimwe mishonga inogona kuwirirana neLevocarnitine, kusanganisira mishonga inorayira uye inopfuura-the-counter mishonga, mavitamini, nemishonga yemishonga. Udza mumwe nomumwe wevatano vako vehutano nezvemishonga yaunoshandisa iye zvino uye chero mushonga unotanga kana kumisa kushandisa.
Raw L-carnitine powder Zvimwe mirayiridzo
Kufanana nemamwe akawanda ekuwedzera, L-carnitine inoratidzika kunge yakachengeteka uye isingabhadharwi nemigumisiro yakakomba iyo inoshandiswa zvine musoro uye sezvinorayirwa.
Imwe ongororo yakaongorora kuchengetedzeka kwaL-carnitine nekupa vatori vechikamu magiramu matatu zuva rega rega kwemazuva makumi maviri nerimwe. Ropa rakazara reropa rakaitwa kune mumwe nemumwe anenge achitora chikamu pakutanga nekupera kwechidzidzo, uye hapana chakaipa chakaonekwa.
Nzira yekutenga L-carnitine powder kubva kuAASraw